Silicone Isikhunta Umshini Ukulingisa Services
Umkhiqizo Incazelo Incazelo: Plastic Rapid prototyping Dimension: 600 * 300 * 200mm ukubekezelelana: +/- 0.05 mm ukwelashwa Surface: Hand wokucwebezelisa Color: omhlophe noma ngokwezifiso Isicelo: Industrial Mkhiqizo Kungani kufanele ukhethe thina? Sinikeza eyodwa-stop isixazululo amasevisi okusheshayo prototyping! Youde isihambile ukucutshungulwa ukukhiqizwa prototype okusheshayo imigqa. Sine enamandla yokukhiqiza khono, CNC machining izikhungo, ...
Igama Brand: Youde
Ukuthumela Port: Shenzheng noma HongHong
Isikhathi Ukuhola: 5 ~ izinsuku 12
Into Ayikho: prototyping 17052601
Inkokhelo Imigomo: 50% Idiphozithi nge PO, 50% ngaphambi kokubeletha
Incazelo: Plastic Rapid prototyping Dimension: 600 * 300 * 200mm
ukubekezelelana: +/- 0.05 mm ukwelashwa Surface: Hand ezipholisha
Umbala: omhlophe noma ngokwezifiso Isicelo: Industrial Mkhiqizo
Sinikeza eyodwa-stop isixazululo amasevisi okusheshayo prototyping!
Youde isihambile ukucutshungulwa ukukhiqizwa prototype okusheshayo imigqa. We have powerful manufacturing capability, CNC machining centers, 3D Printing, plus auxiliary equipment like milling machine, Sand Blasting Machine, drilling machine etc and the cooperation of our partners, we are able to support every different components of the prototyping
Eminyakeni engaphezu kwengu-11 zokuhweba kanye nokukhiqiza nakho.
ukuze Small iyatholakala
Uphakeme intengo Evumayo Okuhle inkonzo.
Umsebenzi onzima QC ithimba lethu umsebenzi yibhange izinga esitebeleni.
Le komiti wazibonela ekuhlinzekeni ukukhiqizwa ngomklamo ngokwezifiso futhi OEM oda.
1. ngokwezifiso CNC Machining Izikhungo: Yenza machining izinhlobo metal ezingxenyeni ezisempumalanga nasezingxenyeni plastic ngokuvumelana nobe umdvwebo wakhongokwezifiso
2. amasevisi ngokwezifiso 3D Ukuphrinta: singakwazi yokukhiqiza ngokushesha nge-SLA kanye SLS ngokuvumelana imikhiqizo yakho nezidingo.
3. ngokwezifiso Silicone Isikhunta Umshini Ukulingisa: Sinikeza kwesivivinyo encane oda ukusebenzisa amasevisi kuwe yi abicah isikhunta cleaner ekusakazeni.
4. Prototype Yenza: Siyakwamukela ukwenza prototype
Kwethu ngokushesha prototyping KWAMAKHONO
CNC machining, 3D wokunyathelisa (SLA), Silicon isikhunta thusi, laser cutting, Bending njll
ABS, i-PC, PP, PMMA, PE, POM, PA, Rubber, Silicone, njll
Aluminium noma ezinye izinto: Brass, Bronze, yethusi, Engagqwali.
Usayizi: 2000 * 1200 * 1000mm noma ngezifiso
Prototyping sici (ukuma)
Ngokwezifiso, singakwazi machining isici eziyinkimbinkimbi
Penda, sula, usilika-ukuphrinta, anodize, ebusweni esobala, ebusweni angenisa ukukhanya, ibhulashi, uwoyela iraba, electroplate.
amafayela Iyatholakala ifomethi
.stp / .pdf / .xt / .Isinyathelo ./. DWG / .dxf / .igs / .prt / .stl / .sldprt
YOUDE Prototype kuyinto zingcwele prototyping okusheshayo iminyaka engu-11, siba nakho onothile okusheshayo service prototyping, singahlinzeka ikhambi ofanelekile CNC machining, 3D zokunyathelisa, Silicone Isikhunta Umshini Ukulingisa, tooling Rapid ngokuvumelana umdwebo wakho nezimfuneko, and make your idea be prototype in few days, it can save the cost and time for you.
Sizokunikeza ngokucophelela emasakeni ethu isiphakamiso noma nokupakisha ngokuvumelana nemfuneko yakho.
Thina nihlela ukuletha out by DHL / FedEx / UPS njll noma ngokuvumelana nemfuneko yekhasimende.
Siyakwamukela uxhumane nathi, siyozama ukwenza konke okusemandleni ethu ukuba sihlangabezane nezimfuneko yakho!
Thumela Uphenyo yakho Yokuxhumana ku Ngezansi, Chofoza u- "Thumela" Manje!
Previous: Plastic Fast Prototyping Izikhungo
Olandelayo: High sula ebusweni aluminium prototyping
Inani Small CNC Rapid Prototyping
Plastic Prototype Ukukhiqiza
CNC Machining Plastic Prototype ngoba yesilawuli kude
plastic Professional Prototyping Rapid
Plastic Prototype Machining Izikhungo